vendredi, 12 octobre 2018 09:32
Lisi-pifidianana: Mivoha sa mikatona ?
Mampametra-panotaniana ireo sefo Fokontany eto an-drenivohitry ny Faritra Menabe manoloana ny fomba fiasan'ny CED Morondava.
Nisy ny filazana fa hoe : efa nalefan'ny delege any amin'ny CED ny anaran'ireo olona efa tao anatin'ny lisi-pifidianana teo aloha nefa tsy tafiditra amin'ny vaovao, ka hanaovana lisitra vaovao, nefa tsy nampahafantarina ireo Sefo Fokontany akory izany.
Ny alakamisy 11 oktobra 2018 dia nisy filazana avy amin'ny CED Morondava tonga tamin'ny radio mba hovakiana hampahafantarina ny vahoaka.
Ora iray taorian'ny fanaterana azy indray dia nahazo toromarika ny radio fa hoe : ajanona ny famakiana ilay filazana fa efa voaray daholo ilay lisitra.
Avy aiza ireo lisitra ireo, ary iza no nanome azy ny delege ka nampanatitra azy any amin'ny CED, hoy ireo Sefo Fokontany ?
Aoka samy hanara-maso ny tsirairay fa tsy tompon'antoka izahay, hoy ireo Sefo Fokontany eto Morondava sendra anay.
vendredi, 12 octobre 2018 09:21
Sambava: Narodana ireo trano heva nisy nanorina teo amin’ny tetezana Antaimby
Niteraka resabe teto amin’ny tanàna tokoa ity tranga ity.
Samy niezaka nampaneno lakolosy ny olona rehetra nanairana ireo tompon’andraikitra ka omaly maraina dia raikitra ny fandrodanana taorian’ny fampiomanana ireo mpivarotra seza sy hazo teo, mba samy hanaisotra ny azy.
Natao izao hoy ny Ben’ny Tanàna vonjimaika Rtoa Kalozafy dia mba ho fanadiovana an'ity Sambava ity, fa efa malaza ratsy amin’ny tsy fanarahan-dalana loatra isika ka santatra ambavarano izao fa dia hitohizana foana amin’izay.
vendredi, 12 octobre 2018 09:11
Ivato-Antananarivo: Hiakatra ho 800 Ar ny sarandalana
Hihatra manomboka amin'ny 29 oktobra izao io sarandalana vaovao io, ho an'ireo taxi-be mampitohy an'i Vassacos Antananarivo amin'ny Horizon Ivato.
Nisy nanomboka omaly ny fizarana taratasy fampahafantarana izany tamin'ireo taxi-be mitrandraka io zotra io.
Omaly ihany dia efa maro ny mpamily sy mpandeha naneho ny tsy fankasitrahana izany fanondrotana sarandalana izany.
vendredi, 12 octobre 2018 08:32
Sambava: Vary lo nafindra gony saika hamidy
Magazay an'ny teratany vahiny iray eto Sambava no nahitana izany. Nanaitra ny nahita ireo mpiasa manivana vary, izay efa simba, avy eo nafindra gony vaovao be, mba tsy hafantarana fa vary efa nitsimponina ireto raha tonga any amin'ny mpanjifa.
vendredi, 12 octobre 2018 08:31
Fifidianana: Hamory ireo kandida ny CENI
Rahampitso sabotsy 13 oktobra no voatondro hisian'io famoriana io. Kandida filoham-pirenena miisa 17 amin'ireo 36 no voalaza fa efa namaly ny ho avy amin'izany.
Voakihana ny CENI mikasika ny lisi-pifidianana. Hisy rahateo amin'ity anio ity andiana kandida hanatitra fitarainana eny amin'ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana amin'ny tokony hanokafana ny lisi-pifidianana hampidirana ny anaran'ireo olom-pirenena feno taona sy afaka mifidy nefa tsy tafiditra anaty lisitra.
Etsy ankilany, ny CENI dia namaky bantsilana ny tsy fanarahan-dalana ataon'ireo kandida, toy ny tsy fanaovan'izy ireo fampilazana sy fangatahana fahazoan-dalana hanao fampielezan-kevitra nefa tokony hatao 48ora mialoha izany.